Vaovao - mpanao gazety Xinhua News Agency an'ny biolojia Chenguang
Mpitati-baovao Xinhua News Agency an'ny biolojia Chenguang
Tamin'ny 8 Desambra, nangatsiaka indrindra i Quzhou tamin'ny vanim-potoana oram-panala. Tokony ho tamin'ny 5 hariva, Chen Zhonghua, filoha lefitra mpanatanteraka ao amin'ny Sampana Hebei ao amin'ny masoivohom-baovao Xinhua, Wang Min, talen'ny Minisiteran'ny raharaham-toekarena, Yan Qilei, talen'ny lefitry ny Minisiteran'ny raharaham-pirenena, ary olona dimy hafa dia nanao manokana fitsangatsanganana avy any Shijiazhuang mankany biolojika Chenguang hanadihady an'i Lu Qingguo, mpitantana ny Hebei “fanovana orinasa iray alina”.
Tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny fahefatra an'ny orinasan'ny vondrona biolojika Chenguang, nandray ny sezany ireo vahiny sy ireo vahiny. Taorian'ny nijerena ilay sarimihetsika endri-javatra biolojika Chenguang, dia naneho fitsikitsiky tamin'ny endriny voatokana i Chen Zhonghua. Niaraka tamin'i Lu Qingguo i Chen Zhonghua niditra tao amin'ny efitrano fampirantiana. Lu Qingguo dia nanolotra ny toe-java-misy ankapobeny, ny lalam-pampandrosoana, ny fizarana ny vokatra sy ny toha-bolana ary ny toerana misy eo amin'ny sehatry ny biolojia Chenguang. Talohan'ny fizarana fizarana an'ilay orinasa, rehefa nampahafantatra i Lu Qingguo fa i Chenguang biolojika dia nividy tany maherin'ny 100000 mu tao Zambia ho toy ny fotodrafitrasa mba hanaovana “kodiarana” ho fampandrosoana ny orinasa amin'ny ho avy, dia nidera hatrany hatrany i Chen Zhonghua: “vina ! Manana ny ozinanao fampitaovana ianao. Manana ny zon'ny manam-pahaizana manokana ianao amin'ny fizotrany, teknolojia ary fitaovana. Tsy misy olon-kafa afaka mianatra sy hahatratra anao. Ny fananganana tohodrano akora any Afrika koa dia fanomanana amin'ny andro orana. Izy io dia ny fitazonana ny lamina voalohany an'izao tontolo izao amin'ny ho avy. ”
“Ny vokatra vokarinay izao dia amidy any Etazonia ho toy ny akora (vokatra fitsaboana), ary avy eo fonosina anaty kapsily any Etazonia ary amidy any Chine. Amidinay amin'ny iray yuan izy ireo ary vidinay 100 yuan any Etazonia. Heverinao ve fa mahavita fatiantoka isika? ” Nanohy ny teniny i Lu Qingguo: “andao hiroso amin'ny indostrian'ny fahasalamana maoderina misy ny vokatra fikarakarana ara-pahasalamana sy ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ary hataontsika vokatra tsy mitongilana, mba hahafahan'ny olon-tsotra mihinana azy. Tsara sy mora ny vokany. ” Nandray ireo teny ireo i Chen Zhonghua ary nilaza hoe: “Amin'ity fomba ity, tsy mila mivoaka any ivelany intsony isika hanamboatra simika!”
Samy mieritreritra izy ireo fa fotoana mety ho an'ny bio Chenguang ny fanaovana sakafo ara-pahasalamana. Ao anatin'ny 10 na 20 taona ho avy, hiakatra ny haavon'ny fihinanana olona, ​​hihatsara ny fahatsiarovan-tenany amin'ny fahasalamana, ary hanana fahatakarana tsara kokoa ny marika sinoa izy ireo. Amin'izay fotoana izay dia ho voajanahary amin'ny orinasa ny mihabe sy mihamatanjaka.
Nampahafantatra tsirairay ny vokatr'ilay orinasa tamin'ny mpanao gazety i Lu Qingguo, izay nahatonga ny mpanao gazety ho vaovao sy vaovao. Chen Zhonghua dia nilaza hoe: "Noheveriko ho mpanamboatra fitaovana io." Namaly tamin'ny fomba mahatsikaiky i Lu Qingguo: “roapolo taona lasa izay, nanamboatra fitaovana izahay.” Nanondro ny takelaka misy ny "ivon-teknolojia fantatry ny firenena fanta-daza" eo amin'ny rindrina, hoy izy: "Nomena tombon-tsoa ho an'ireo ivon-teknolojia maherin'ny 1000 ao Shina izahay, ary am-polony ihany ireo tsara indrindra, ao anatin'izany ny Huawei, ZTE, sns Yan Qilei, izay matetika mitantana ny fivorian'ny komitin'ny antoko faritany sy ny governemantam-paritany dia nilaza tamin'i Lu Qingguo hoe: "Ny governora Xu Qin dia nanao dokambarotra ho anao tao Chenguang tao anatin'ny roa taona lasa. Na kely toy inona aza ny fivoriana, hoy izy, ”Oh! Tsy nampoiziko ny hananan'i Quzhou, faritany fambolena toy izany, tompondaka tsy hita maso toy izany!